100L Steam Brewhouse (saizi inogadziriswa), China 100L Steam Brewhouse (saizi inogadziriswa) Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - NingBo COFF Machinery Co., ltd
100L Steam Brewhouse (saizi inogadziriswa)
Skid yakakwira, yakanaka kutarisa, plug uye kutamba, sarudzo yakanakisa yekubika imba uye kudzidza kwendege.
Mazhinji emakambani ekudhirowa anotanga bhizinesi ravo kubva kudiki diki echinyorwa. Ndosaka COFF timu yakazvipira pachavo kupa vatengi neyakajairwa mhinduro kubva dhizaini, kugadzira kune mushure-yekutengesa sevhisi. Nemidziyo yeCOFF, unogona kutarisira kukura mukukosha.
Nei uchiganhurira kugona kwako kwekubika doro nemidziyo isina mbichana uye isingashande? Zvishandiso zveprimiyamu zvinodhura zvakanyanya here? COFF inogona kuunza doro rako kuhupenyu nekukwirisa mashandiro, anodhura-anodakadza mabhegi ayo akagadzirwa zvizere kubva kune yakasarudzwa SS304, uchishandisa akanakisa ezvehutsanana zvinhu uye mune yakanakisa yepamusoro yekupedzisa kugadzirisa mashandiro ako.
Skid-yakakwira, yakanaka chitarisiko, plug uye kutamba, yakanakisa sarudzo yekumba doro
● Mari inodhura
● Kukura: 24000x920x2000mm
● Kubatanidzwa kwe:mash & l auter tun. Kettke uye HLT
- Wepamusoro girazi manway
- Kunze sheathing: SS304, 2mm,
-Aluminium silicate donje yakadzivirirwa,
- Yakakomberedzwa lauter skrini, ukobvu 4mm
- Rutivi rectangle akashandisa gorosi chiteshi
-Wort bvunzo kifaa- RTD-PT100 tem-sensor
- Yakachena SUS pombi uye mavhavha
- (Motokari inotyaira agitator kusarudza)
- Muchinjisa wekupisa newort aeration gungano
- SUS furemu
- Kudzora kabhodhi, SS304, 2mm,
- Sparge mhete nema sprayers(kusarudza)
- Kunze kwe wort kupihwa (sarudzo)
- Brew kettle condensate mutori (sarudzo)
Craft Kuitisa Midziyo
Industrial Brewing Midziyo
Micro Beer Kuitisa Midziyo
Micro Brewing Maitiro
50L Electric Kuitika (Saizi inogona kuve tsika yakagadzirwa)
20L Electric Brewing (tsika saizi inowanikwa)
0.2BBL-2BBL Fermentation Tank (mamwe maratidziro anogona kuve akagadzirwa)